Valerie Laure Bilogue chases her dreams with the help of community college - Amjambo Africa
Valerie Laure Bilogue chases her dreams with the help of community college
Oct 6, 2021 | 0
Waxaa qoray Stephanie Harp
Markii Valerie Lau.re Bilogue ay Maine ka timid Cameroon sanadkii 2018, waxay horey u haysatay shahaadada laba sano ee sayniska kombiyuutarka waxayna u shaqeysay sidii macallin teknolojiyadda macluumaadka (IT). Waxay ogaatay inay rabto inay ka shaqeyso goobta kombiyuutarka Kadib markay isku dayday – iyada oo aan ku guuleysan – inay u gudbiso aqoonsig eeda Maine, waa inay raadisaa hab kale
Gudaha Presque Isle, halkaas oo ninkeedu yahay arday kalkaaliso, waxay iska diiwaangelisay fasallada si ay u hesho horumar waxbarasho oo guud, ama GED, shahaado, oo u dhiganta dibloomada dugsiga sare ee Mareykanka. Kadibna waxay ka bilowday barashada kombiyuutarka iyo farsamada isku -xirka Waqooyiga Maine Community College (NMCC). “Markii aan imid Mareykanka, runtii waa igu adkayd inaan ku dhawaaqo xitaa hal eray oo Ingiriis ah, ”Ayay tiri. Luuqadeeda koowaad waxay ahayd Faransiis. “Aad bay u adkayd in halkan lagu daro sidii arday waqti-buuxa ah, barashada Ingiriiska,\_” ayay tidhi. Waxay ku qasbanaatay inay u turjunto wax kasta oo ay ka taqaan kombiyuutarada Faransiis ilaa Ingiriis. Laakiin way ka go’nayd.
“Waxaan leeyahay hadafyo aan runtii doonayo inaan gaaro. Taasi waa sababta aan runtii ugu dadaalay inaan halkaan joogo. ” Waxay jeceshahay caqabadaha. “Qof walba oo i yaqaan wuu iga og yahay aniga. Waan jeclahay caqabadaha. Waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa aan awoodo, ”ayay tiri Markay ugu sarraysay inay dugsiga joogto waqti buuxa markay baranayso Ingiriiska, kii ugu yaraa afarteeda carruur ah waxay jirtay saddex bilood oo keliya markii ay ka bilowday NMCC. “Runtii aad bay u adkayd, daryeelka ilmaha, ma seexan habeenkii. Waxaan shaqeeyey laba jeer. ”
Carruurta awgood, dad badan ayaa kula taliyay inay gasho kalkaaliso, iyagoo leh waa beer u wanaagsan hooyada. “Waxaan ku idhi,‘ Maya, kuma raaxaysan doono halkaas. ’Waxaan u baahanahay wax aan ku raaxaysan doono, oo samaynaya wax aan jeclahay. Taasi waa sababta aan u galay garoonka kombiyuutarka. ” Bishii Juun, Laure Bilogue ayaa sidoo kale noqotay wakiilka ardayga ee Guddiga Maamulayaasha Kulliyadda Beesha Maine. Waxaa soo magacaabay Gov. Janet Mills waxaana xaqiijiyay Senate -ka Maine.
Waxay ku qiimaynaysaa dadka NMCC iyo nidaamka kulliyadda beesha oo dhan inay caawiyaan, taasina waa sababta ay u doonaysay inay ku biirto guddiga – si ay uga caawiso dadka kale inay arkan in kulliyadaha beesha ay yihiin ikhtiyaar wanaagsan. “Muhaajiriin badan ayaan ogahay inay cabsan yihiin.
‘Xaggee ku nooshahay hadda? Sidee bay u shaqaysaa? ’Ayay is weydiiyaan. Ma doonayo in muhaajiriintu ka baqaan inay galaan kulliyadda. Sababtoo ah [MCCS] runtii waxay u furan tahay inay caawiso qof walba oo doonaya inuu iskuul aado, ”ayay tiri. “Waxay u baahan yihiin oo kaliya inay waxbartaan. Waxay kaliya u baahan yihiin inay tagaan oo ay si adag u shaqeeyaan. ”
Xubin ahaan guddiga, waxay rabtaa inay ku dhiirrigeliso qof walba inuu sii wato waxbarashada. “Qof kasta oo leh yool, aragti laga yaabo inay ka baqayaan inay gaaraan. Waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan inaysan ahayn dhallinyaro ku filan si ay u gaaraan. Maya.
Runtii waxaan rabaa inaan tuso in wax walba ay suurtogal u yihiin dhammaan soo -galootiga, oo aan ahayn soo -galootiga oo keliya laakiin qof kasta oo weyn Mainer. ” Markii ay bilawday, waxay kaliya qorshaysay inay aado iskuulka. “Xitaa ma aanan malaynaynin inaan aad uga sii fogaanayo, sida magacaabista. Waxaan rabay oo kaliya inaan aado dugsiga si aan u gaaro waxbarashadayda, oo aan u qaato shahaadadayda.
Ka dib markay ka qalin jabisay NMCC bishii Maajo iyada oo xubin ka ah Phi Theta Kappa Honor Society, waxay qaadaysaa xitaa caqabado badan. Xilliga dayrtaan waxay bilawday barnaamijka shahaadada koowaad ee khadka tooska ah ee internetka iyada oo u mareysa Jaamacadda Maine ee Augusta, iyada oo baratay amniga internetka. \_”Waxaan jeclaan lahaa, laga yaabee laba sano iyo bar gudahood, inaan helo shahaadada bachelor-ka oo laga yaabo inaan ku sii wato barnaamijka master-ka,\_” ayay tiri. “Intaa ka dib, waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii aan awood ku leeyahay inaan sii wado wax badan.
Ma doonayo inaan joojiyo ka hor shahaadada masterka. ” Dhanka kale, waxay si buuxda ugu shaqaysaa farsamo -yaqaanka IT -ga Xarunta Caafimaadka ee Cary ee Caribou. Cunugeeda ugu weyn, gabadh, ayaa ku tidhaahda, \_”Waxaan u malaynayaa inaan heli doono shahaadooyin iyo sharaf ka badan adiga, Hooyo.\_” Laure Bilogue, oo ah tii ugu horraysay qoyskeeda ee dhigata kulliyadda, ayaa sheegtay in gabadheedu ay aad u shaqayso. “Waxay heshay dhibco aad u wanaagsan sababtoo ah waxa i aragtaa qof ku dayasho mudan.
Ka sokow dhiirrigelinta carruurteeda, Valerie Laure Bilogue waxay diiradda saareysaa farriinteeda “Waxaan doonayay inaan muujiyo inay suurtogal tahay, da’ kasta iyo waqti kasta oo nolosha dumarka ah – in kastoo aad carruur leedahay, inkastoo aad xaas tahay – inaad sii wadato iskuulka aad dhigato, sii wadato waxbarashadaada, oo aad gaarto hadafkaaga oo aad gaarto rabitaankaaga, ”ayay tiri. “Suurtagal ma aha. Taasi waa wax aan doonayay inaan qof walba tuso. ”
PreviousWaxaa la cusbooneysiiyaa COVID-19 Delta kala
NextInaad shaqaale tahay iyo inaad yeelato ganacsi kuu gaar ah